Izindaba - Cutting disc & ukugaya amasondo
A: Izinto zokusika i-disc:
Ama-discs wokusika angahlukaniswa abe izinhlobo ezimbili: i-resin cutting disc ne-diamond cutting disc. Ingasetshenziselwa kabanzi ukusika imikhiqizo yensimbi ejwayelekile, insimbi engagqwali nezinto ezingezona ezensimbi.Ngaphezu kwalokho, ngenxa yendawo yokusebenza yokusika nokupholisha, njengamandla enuzi nezitshalo zamandla ezishisayo nezinye izidingo zokusebenza, isidingo sediski yokusika ukukhululeka ngensimbi nesibabule nezinye izinto zamakhemikhali ukuze kusebenze ngempumelelo. Ngakho-ke, kukhona ama-disc akhethekile okusika embonini yamandla enuzi, futhi angasetshenziswa ekusetshenzisweni okusikayo okuhlukahlukene kwensimbi yensimbi, insimbi engagqwali, insimbi ye-alloy, insimbi yensimbi nezinye izinsimbi:
A: Izingxenye zokusika i-discs
Idiski yokusika yenziwa ngama-abrasives, ama-bonding agents.Izici zokusika ama-discs ikakhulukazi zinqunywa yizinto ezinjenge-abrasive, ubukhulu bezinhlayiyana, i-ejenti yokuqinisa, ubulukhuni, ukuma nosayizi. Phakathi kwabo, i-abrasive ivame ukusetshenziswa njenge-alumina oxide noma idayimane, futhi okuyingxenye e-abrasive kuphela ehilelekile ekusikeni nasekugayeni!
C: Ukuzisika nokugaya imininingwane yediski
Imininingwane ephelele yediski yokusika nediski yokugaya ayihlukile kakhulu. Ngenxa yezindlela zabo ezahlukahlukene zokusebenzisa, idiski yokugaya iyajiya, ukuze ihlale isikhathi eside ngaphansi kwezimo zokusebenza kokugaya, kepha idiski yokusika isetshenziselwa ukusika i-longitudinal futhi ayikwazi ukusetshenziswa njenge-disc yokugaya, ngaphandle kokuthi Isondo lokugaya lenzelwe ngemisebenzi yokusika nokugaya yomibili, ngaphandle kwalokho noma yikuphi ukuziphatha okungalandeli umklamo womkhiqizo uqobo kuyingozi.
D.Izici ukusika akwazi ukugcina
I-resin cutting disc kulula ukuyiqhekeza, mhlawumbe yonakalise okokusebenza noma yenze abasebenzi balimale, ngakho-ke ama-mush athola ikhava evikelayo lapho usika.
Ama-disc okusika we-TAA alloy akhiqizwa nge-brazing. Ngaphansi kwezimo ezithile, ungqimba lwedayimane luboshwe ngokuqinile ku-substrate yensimbi ngemuva kwenqubo yokuncibilika kwesimbi. Lolu hlobo lomkhiqizo lunezici zokusebenza kahle kokugaya, impilo ende yensizakalo, ukuphepha, ukuvikelwa kwemvelo nokungcoliswa okungenawo umoya.Faka esikhundleni i-disc yamanje ye-resin bond corundum cutting disc, i-disc yokusika ye-electroplated, kanye nediski ethile yokusika eshisayo eshisiwe. Ifanele ukusika amapayipi ayindilinga, izinsimbi eziyizikwele, imigoqo yensimbi, izinsimbi zama-engeli, izinsimbi zesiteshi, imishayo ye-I, namanye amaphrofayli ensimbi, kufaka phakathi "imishini yokuphonsa izinsimbi ngokunemba", izinsimbi ze-spheroidal graphite cast nezinsimbi ezahlukahlukene zezingulube.
Ukuqhathanisa phakathi kwama-disc resin anamadayimane alloy disc: